NKWUKWU NDỊ NA-AGBANYE MGBE NKWU NDỊ NKWUKA iji mee ka ọdụm dị elu, KLAS, KJFK & More Question 1 afọ 9 ọnwa gara aga #1208
FSX-SE Windows 10 - ebudatara m ọdụ ụgbọ elu KLAX taa ma legharịa anya. Egwu mara mma mana enwere nkụda mmụọ na enweghi AI na ọrụ gburugburu ọdụ ụgbọ elu. Enwere m ntọala m n'ogo 100% n'ihe niile nwere ezigbo ọnụego etiti. Ajụjụ m: Enwere nbudata AI nke ga-ejupụta ọdụ ụgbọ elu niile ma ọ bụ ọdụ ụgbọelu nhọrọ? Ahụbeghị m ihe ọ bụla ma ọ bụ amaghị ebe ọzọ m ga-ele anya. Daalụ maka enyemaka ọ bụla.
Ndumodu ikpe azu: site PROSTOCK.
NKWUKWU NDỊ NA-AGBANYE MGBE NKWU NDỊ NKWUKA iji mee ka ọdụm dị elu, KLAS, KJFK & More Question 1 afọ 9 ọnwa gara aga #1224
NKWUKWU NDỊ NA-AGBANYE MGBE NKWU NDỊ NKWUKA iji mee ka ọdụm dị elu, KLAS, KJFK & More Question 1 afọ 8 ọnwa gara aga #1227
nke a nwere ike inye aka www.justflight.com/product/traffic-global . Naanị ụgbọ elu na-eme onye ọzọ a na-akpọ okporo ụzọ 360 .. nke m chere dị mma. na-enye ụgbọelu, ụgbọ elu ụgbọ elu, servuices na okporo ụzọ okporo ụzọ n'okporo ụzọ / okporo ụzọ wdg. Ndị mụ na ha na-eji okporo ụzọ 360 eme njem bụ ihe a na-ahụ anya. Echere m na ha ejirila okporo ụzọ 360..might nwee ike inweta ụdị igbe na ebay / amazon.
Oge ike page: 0.471 sekọnd